တွဲဖက်ကစား ခဲ့ဖူးတဲ့ အာဆင်နယ် ကစားသမားတွေ ထဲမှာ ဘယ်သူက အကောင်းဆုံးလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ နာချို မွန်ရီရယ် - SPORTS MYANMAR
တွဲဖက်ကစား ခဲ့ဖူးတဲ့ အာဆင်နယ် ကစားသမားတွေ ထဲမှာ ဘယ်သူက အကောင်းဆုံးလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ နာချို မွန်ရီရယ်
နာချို မွန်ရီရယ်က လက်ရှိ ချီလီ လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှုး အလက်ဆစ် ဆန်းချက်ဟာ သူ့ရဲ့ အာဆင်နယ် ကစားသမား ဘ၀ အတွင်း တွဲဖက် ကစား ခဲ့ဖူးတဲ့ အသင်းဖော် တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံး ဘောလုံး သမား ဖြစ်တယ်လို့ ဖွင့်ဟ သွားပါတယ်။ အသက် ၃၃ နှစ် အရွယ် မွန်ရီရယ် နဲ့ ဂန်းနား တို့ရဲ့ ၇ နှစ်ခွဲကြာ ပက်သက်မှုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့က ပြီးဆုံး သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး စပိန် ဘယ်နောက်ခံလူဟာ လာလီဂါ ကလပ် ရီးရဲယ် ဆိုဆီဒက် အသင်းကို ၂ နှစ်စာချုပ် နဲ့ အပြီးသတ် ပြောင်းရွေ့ သွားခဲ့ ပါတယ်။
သြဂုတ်လ အစပိုင်းက အသက် ၂၂ နှစ် အရွယ် ကီရန်တီယာနေး ဆဲတစ် အသင်းမှ ပြောင်းရွေ့ လာခဲ့ပြီးနောက် နည်းပြ အူနိုင်း အမ်မရီဟာ မွန်ရီရယ်ကို ပထမ အသင်းမှာ အကန့်အသတ် နဲ့သာ ပွဲထွက်ခွင့် ရတော့မယ်လို့ အသိ ပေးခဲ့ကြောင့် ဖော်ပြမှုတွေ ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့် အတွက် အလို ရှိနေတဲ့ မွန်ရီရယ်ဟာ လာလီဂါ ကလပ်ကို ပြောင်းသွား ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အသက ၃၃ နှစ် အ၇ွယ် ကစားသမားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က အက်သလက်တီကို ကို ၂ – ၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပွဲဦးထွက်မှာ ဂိုးလည်း သွင်းနိုင် ခဲ့ပါတယ်။
စပိန် ကစားသမားဟာ အာဆင်နယ် အသင်းမှာ ပရိတ်သတ် အချစ်တော် ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပြင် လန်ဒန်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်ခွဲမှာ အမှတ်တရ များစွာလည်း ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မွန်ရီရယ်ဟာ သူ့ရဲ့ အာဆင်နယ် ကစားသမား ဘ၀ အတွင်း ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ ထိပ်တန်း ကစားသမား တွေနဲ့ ရင်ဆိုင် ခဲ့ဖူးသလို ထိပ်တန်း ကစားသမား တွေနဲ့လည်း အတူ တွဲဖက် ကစား ခဲ့ရပါတယ်။
လက်ရှိ အင်တာမီလန် အသင်းမှာ ကစား နေတဲ့ အလက်ဆစ် ဆန်းချက် ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီလက အာဆင်နယ် အသင်းမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကို ပြောင်းရွေ့ ခဲ့ပြီးနောက် အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ခက်ခဲ ရုန်းကန် ခဲ့ရတဲ့ အချိန် ကာလတွေကို ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မွန်ရီရယ်က ချီလီ တိုက်စစ်မှုးဟာ အမ်းမရိတ်မှာ သူတွဲဖက် ကစား ခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေ ထဲမှာ အကောင်းဆုံး လို့ မှတ်ချက် ပေးသွား ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မွန်ရီရယ်က သူ့အနေနဲ့ အာဆင်နယ်မှာ အလက်ဇန်းဒါး လက်ကာဇက် ၊ ပီယာ အမ်းမရစ် အူဘာမီယန်း ၊ ပီတာချက် နဲ့ ဆန်တီ ကာဇိုလာ တို့လို ကစား သမား တွေနဲ့ အတူ တွဲဖက် ကစား ခဲ့ရတာဟာ အထူး အခွင့်အရေး တစ်ခုလို့ မြင်မိကြောင်း ဖြည့်စွက် ပြောသွား ပါတယ်။
မွန်ရီရယ် က “ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘ၀ရဲ့ အလှပဆုံး အတွေ့အကြုံ တွေထဲမှာ အာဆင်နယ် အသင်းမှာ ကစားခွင့် ရခြဲ့ခင်းဟာ တစ်ခု အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီမှာ ၇ နှစ်ကြာ ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ကစားသမားကောင်း တော်တော် များများ နဲ့ တစ်သင်းတည်းမှာ တွဲဖက် ကစား ခဲ့ဖူး ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ကစားသမားက ဘယ်သူလဲ? ကျွန်တော် အလက်ဆစ် ဘက်က ရှိပါတယ်။ သူဟာ လုံးဝကို ခြားနားတဲ့ ကစားသမားပါ။
သူ့ရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းပုံကို တစ်မိနစ်လောက် မြင်တွေ့ လိုက်ရ ပြီးနောက် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ သူ ဘယ်လို ကစားသမားမျိုးလဲ ဆိုတာ သဘောပေါက် သွားခဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ လက်ကာဇက် ၊ အူဘာမီယန်း ၊ ပီတာချက် ၊ ဆန်တီ ကာဇိုလာ အပြင် အခြား ထိပ်တန်း ကစားသမား တို့နဲ့ အတူ အ၀တ်လဲခန်း တစ်ခုတည်းမှာ ရှိခွင့် ရခဲ့တာဟာ အထူး အခွင့်အရေး တစ်ခုလို ခံစား မိပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
မွန်ရီရယ်က သူဟာ အာဆင်နယ် အသင်း ကနေ ထွက်ခွာ သင့်တဲ့ အချိန်မှာ ထွက်ခွာ ခဲ့တာလို့ ယူဆ နေပြီး သူနဲ့ အမ်မရီ တို့ကြားမှာ ဘာပြသနာမှ မရှိ ခဲ့ဘူးလို့ ၀န်ခံ သွားပါတယ်။
စပိန် ဘယ်နောက်ခံလူက “ဒါတွေ အားလုံးဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား ရှိတဲ့ နှစ်မှာ စတင် ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တေ်ာတို့ စာချုပ် ကိစ္စ အတွက် စတင် စကား ပြောခဲ့ ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အချိန်မှာ အာဆင်နယ်ကို အူနိုင်း အမ်မရီ ရောက်လာ ခဲ့ပြီး သူဟာ ကျွန်တော့်ကို အလို ရှိတယ် ဆိုတာ ရှင်းလင်း ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် ပျော်ရွှင် ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် စာချုပ် ချုပ်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်း ကလည်း အသစ် ဖြစ်နေ ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီနွေရာသီမှာ ကျွန်တော် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရှိနေ ခဲ့ပြီး ကျွန်တော် ဒီမှာ ဆက်ကစားဖို့ အတွက်သာ တွေးတော ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ နောက်ထပ် ဘယ်နောက်ခံလူ တစ်ဦးကို ခေါ်ယူ ခဲ့ပါတယ်။ အူနိုင်းအမ်မရီဟာ ကျွန်တော့်ကို ဆက်ရှိ စေချင် ပေမယ့်လည်း ထွက်ခွာဖို့ အတွက် တံခါး ဖွင့်ထားတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် သဘောပေါက် ခဲ့ပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
တှဲဖကျကစား ခဲ့ဖူးတဲ့ အာဆငျနယျ ကစားသမားတှေ ထဲမှာ ဘယျသူက အကောငျးဆုံးလဲ ဆိုတာ ထုတျဖျောလိုကျတဲ့ နာခြို မှနျရီရယျ
နာခြို မှနျရီရယျက လကျရှိ ခြီလီ လကျရှေးစငျ တိုကျစဈမှုး အလကျဆဈ ဆနျးခကျြဟာ သူ့ရဲ့ အာဆငျနယျ ကစားသမား ဘဝ အတှငျး တှဲဖကျ ကစား ခဲ့ဖူးတဲ့ အသငျးဖျော တှထေဲမှာ အကောငျးဆုံး ဘောလုံး သမား ဖွဈတယျလို့ ဖှငျ့ဟ သှားပါတယျ။ အသကျ ၃၃ နှဈ အရှယျ မှနျရီရယျ နဲ့ ဂနျးနား တို့ရဲ့ ရ နှဈခှဲကွာ ပကျသကျမှုဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှရောသီ အပွောငျးအရှကေ့ ပွီးဆုံး သှားခဲ့ပွီ ဖွဈပွီး စပိနျ ဘယျနောကျခံလူဟာ လာလီဂါ ကလပျ ရီးရဲယျ ဆိုဆီဒကျ အသငျးကို ၂ နှဈစာခြုပျ နဲ့ အပွီးသတျ ပွောငျးရှေ့ သှားခဲ့ ပါတယျ။
သွဂုတျလ အစပိုငျးက အသကျ ၂၂ နှဈ အရှယျ ကီရနျတီယာနေး ဆဲတဈ အသငျးမှ ပွောငျးရှေ့ လာခဲ့ပွီးနောကျ နညျးပွ အူနိုငျး အမျမရီဟာ မှနျရီရယျကို ပထမ အသငျးမှာ အကနျ့အသတျ နဲ့သာ ပှဲထှကျခှငျ့ ရတော့မယျလို့ အသိ ပေးခဲ့ကွောငျ့ ဖျောပွမှုတှေ ရှိခဲ့ ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ပုံမှနျ ပှဲထှကျခှငျ့ အတှကျ အလို ရှိနတေဲ့ မှနျရီရယျဟာ လာလီဂါ ကလပျကို ပွောငျးသှား ခဲ့တာ ဖွဈပွီး အသက ၃၃ နှဈ အရှယျ ကစားသမားဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ တဈပတျက အကျသလကျတီကို ကို ၂ – ၀ နဲ့ အနိုငျ ရရှိ ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပှဲဦးထှကျမှာ ဂိုးလညျး သှငျးနိုငျ ခဲ့ပါတယျ။
စပိနျ ကစားသမားဟာ အာဆငျနယျ အသငျးမှာ ပရိတျသတျ အခဈြတျော ကစားသမား ဖွဈခဲ့တဲ့ အပွငျ လနျဒနျမှာ ရှိခဲ့တဲ့ ရ နှဈခှဲမှာ အမှတျတရ မြားစှာလညျး ရရှိ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မှနျရီရယျဟာ သူ့ရဲ့ အာဆငျနယျ ကစားသမား ဘဝ အတှငျး ပရီးမီးယားလိဂျ ရဲ့ ထိပျတနျး ကစားသမား တှနေဲ့ ရငျဆိုငျ ခဲ့ဖူးသလို ထိပျတနျး ကစားသမား တှနေဲ့လညျး အတူ တှဲဖကျ ကစား ခဲ့ရပါတယျ။
လကျရှိ အငျတာမီလနျ အသငျးမှာ ကစား နတေဲ့ အလကျဆဈ ဆနျးခကျြ ကလညျး လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ဇနျနဝါရီလက အာဆငျနယျ အသငျးမှာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျးကို ပွောငျးရှေ့ ခဲ့ပွီးနောကျ အိုးထရပျဖို့ဒျမှာ ခကျခဲ ရုနျးကနျ ခဲ့ရတဲ့ အခြိနျ ကာလတှကေို ပိုငျဆိုငျ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး မှနျရီရယျက ခြီလီ တိုကျစဈမှုးဟာ အမျးမရိတျမှာ သူတှဲဖကျ ကစား ခဲ့ဖူးတဲ့ သူတှေ ထဲမှာ အကောငျးဆုံး လို့ မှတျခကျြ ပေးသှား ခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မှနျရီရယျက သူ့အနနေဲ့ အာဆငျနယျမှာ အလကျဇနျးဒါး လကျကာဇကျ ၊ ပီယာ အမျးမရဈ အူဘာမီယနျး ၊ ပီတာခကျြ နဲ့ ဆနျတီ ကာဇိုလာ တို့လို ကစား သမား တှနေဲ့ အတူ တှဲဖကျ ကစား ခဲ့ရတာဟာ အထူး အခှငျ့အရေး တဈခုလို့ မွငျမိကွောငျး ဖွညျ့စှကျ ပွောသှား ပါတယျ။
မှနျရီရယျ က “ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ဘဝရဲ့ အလှပဆုံး အတှအေ့ကွုံ တှထေဲမှာ အာဆငျနယျ အသငျးမှာ ကစားခှငျ့ ရခွဲ့ခငျးဟာ တဈခု အပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျော အဲဒီမှာ ရ နှဈကွာ ရှိခဲ့ ပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ အနနေဲ့ ကစားသမားကောငျး တျောတျော မြားမြား နဲ့ တဈသငျးတညျးမှာ တှဲဖကျ ကစား ခဲ့ဖူး ပါတယျ။ အကောငျးဆုံး ကစားသမားက ဘယျသူလဲ? ကြှနျတျော အလကျဆဈ ဘကျက ရှိပါတယျ။ သူဟာ လုံးဝကို ခွားနားတဲ့ ကစားသမားပါ။
သူ့ရဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး ဆငျးပုံကို တဈမိနဈလောကျ မွငျတှေ့ လိုကျရ ပွီးနောကျ ကြှနျတေျာ့ အနနေဲ့ သူ ဘယျလို ကစားသမားမြိုးလဲ ဆိုတာ သဘောပေါကျ သှားခဲ့ ပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ အနနေဲ့ လကျကာဇကျ ၊ အူဘာမီယနျး ၊ ပီတာခကျြ ၊ ဆနျတီ ကာဇိုလာ အပွငျ အခွား ထိပျတနျး ကစားသမား တို့နဲ့ အတူ အဝတျလဲခနျး တဈခုတညျးမှာ ရှိခှငျ့ ရခဲ့တာဟာ အထူး အခှငျ့အရေး တဈခုလို ခံစား မိပါတယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
မှနျရီရယျက သူဟာ အာဆငျနယျ အသငျး ကနေ ထှကျခှာ သငျ့တဲ့ အခြိနျမှာ ထှကျခှာ ခဲ့တာလို့ ယူဆ နပွေီး သူနဲ့ အမျမရီ တို့ကွားမှာ ဘာပွသနာမှ မရှိ ခဲ့ဘူးလို့ ၀နျခံ သှားပါတယျ။
စပိနျ ဘယျနောကျခံလူက “ဒါတှေ အားလုံးဟာ ကမ်ဘာ့ဖလား ရှိတဲ့ နှဈမှာ စတငျ ခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ စာခြုပျ ကိစ်စ အတှကျ စတငျ စကား ပွောခဲ့ ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီ အခြိနျမှာ အာဆငျနယျကို အူနိုငျး အမျမရီ ရောကျလာ ခဲ့ပွီး သူဟာ ကြှနျတေျာ့ကို အလို ရှိတယျ ဆိုတာ ရှငျးလငျး ခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျော ပြျောရှငျ ခဲ့ရပါတယျ။ ကြှနျတျော စာခြုပျ ခြုပျခဲ့ပွီး စီမံကိနျး ကလညျး အသဈ ဖွဈနေ ပါတယျ။ ပွီးတော့ ဒီနှရောသီမှာ ကြှနျတျော တညျတညျငွိမျငွိမျ ရှိနေ ခဲ့ပွီး ကြှနျတျော ဒီမှာ ဆကျကစားဖို့ အတှကျသာ တှေးတော ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ နောကျထပျ ဘယျနောကျခံလူ တဈဦးကို ချေါယူ ခဲ့ပါတယျ။ အူနိုငျးအမျမရီဟာ ကြှနျတေျာ့ကို ဆကျရှိ စခေငျြ ပမေယျ့လညျး ထှကျခှာဖို့ အတှကျ တံခါး ဖှငျ့ထားတယျ ဆိုတာ ကြှနျတျော သဘောပေါကျ ခဲ့ပါတယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။